पढाइ र गृहकार्यले थिचिँदै बालबालिका- विविधा - कान्तिपुर समाचार
पाँचै बजे उठेर विद्यालय जाने अनि बेलुकी पाँच–छ बजे घर आइपुग्ने विद्यार्थीले बिहानका तीन अतिरिक्त र दिउँसोका नियमित आठ गरी एघारवटा कक्षाका छुट्टाछुट्टै गृहकार्य गरिसक्दा नै रातको दस–एघार बज्छ ।
मंसिर १४, २०७८ साधना प्रतीक्षा
आफ्ना नानीहरूले विद्यालयबाट जति धेरै गृहकार्य पाउँछन्, त्यति नै उनीहरूको पढाइ राम्रो भएको ठान्ने अभिभावकका कारण पनि आजका बालबालिका पढाइको आवश्यकताभन्दा बढी बोझ थेग्न बाध्य भएका छन् । यसबाट उनीहरूको मानसिकतामा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।पठनपाठन भनेको बालबालिकाको रुचिअनुसार स्वतःस्फूर्त रूपमा हुनुपर्छ तर हामीकहाँ यसका विपरीत विद्यालय, शिक्षक तथा अभिभावकको चाहनाअनुसार हुने गर्छ । यसबाट बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभा त कुण्ठित हुन्छ नै, उनीहरू पढाइलाई बोझ पनि ठान्न थाल्छन् ।
निजी विद्यालयहरूले पठनपाठनलाई स्वैच्छिक नभई बाध्यकारी बनाउनाले बालबालिका मात्र होइन, तिनका अभिभावक पनि पीडित छन् । यसै सन्दर्भमा एक परिचितले यसरी दुखेसो पोखेका थिए, ‘मेरी छोरीलाई बिहान अँध्यारैमा उठेर अतिरिक्त कक्षा लिन स्कुल जानुपर्छ । त्यति सबेरै उठ्न उसलाई गाह्रो हुन्छ । समयमा कक्षा पुग्न नसके सजाय पाइने डरले ऊ एक रात स्कुल पोसाक लगाएरै सुतेकी रहिछ । कसो टाई भने लगाएकी रहिनछ ! उसकी साथीकी बहिनीले टाईसमेत लगाएर सुत्दा घाँटीमा कसिएर झन्डै ज्यानै गएको रे !’ उनको भनाइ पूर्णतः यथार्थ हो वा अतिरञ्जनात्मक थियो, थाहा छैन तर पनि आफ्नो उत्कृष्टता र अनुशासनका नाममा निजी विद्यालयहरूले बनाएका नियम बालबालिकाका लागि अनावश्यक बोझ भइरहेकै छन् ।
दस कक्षा पढ्ने एक विद्यार्थीको दैनिकी नजिकैबाट नियालिरहँदा मेरो मनमा प्रश्न उब्जन्छ— ऊ मान्छे हो या कुनै स्वचालित यन्त्र ? बिहान पाँचै बजे उठेर विद्यालय जानु अनि बेलुकी पाँच–छ बजे घर आइपुग्नु ! बिहानका तीनवटा अतिरिक्त कक्षाका साथै दिउँसोका नियमित आठवटा कक्षा गरी एघारवटा कक्षाका छुट्टाछुट्टै गृहकार्य गरिसक्दा नै रातको दस–एघार बज्छ । त्यसबाहेक उसले आफूलाई कठिन लाग्ने विषयको अभ्यास कति बेला गर्ने ? आफ्नो रुचिको विषय कहिले पढ्ने ? खाना खाने समयसम्म मुस्किलले निकाल्ने उसले आराम र मनोरञ्जन कति बेला गर्ने ? आठ कक्षादेखि नै निजी विद्यालयहरूले उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शनका लागि अनिवार्य रूपमा बिहान अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्छन् । महिनादिन शिक्षण संस्थामा जाडो बिदा गरिने काठमाडौंमा बिदा कटौती गरी यसरी बिहान कक्षा सञ्चालन गरिनुले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ । सैद्धान्तिक पढाइमा मात्र आफ्नो सारा समय खर्चिनुपर्ने हुनाले अहिलेका बालबालिका जीवनका लागि आवश्यक व्यवहार र आत्मनिर्भरताबाट समेत वञ्चित हुँदै गएका छन् ।
विकसित मुलुकका विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई सर्वप्रथम आत्मनिर्भर हुन सिकाइन्छ । उमेरसुहाउँदा ससाना काम उनीहरूलाई नै गर्न लगाइन्छ । त्यहाँ किताबलाई भन्दा व्यवहार र प्रयोगलाई महत्त्व दिइन्छ । हामीकहाँ जस्तो बालबालिकालाई गृहकार्यको भारी बोकाउँदै र किताबी ज्ञानमा व्यस्त बनाउँदै पढाइलाई बोझ ठान्ने अवस्था सृजना गरिँदैन । त्यसैले त्यहाँका बालबालिकाहरू व्यावहारिक तथा आत्मनिर्भर देखिन्छन् । निश्चित उमेरपछि उनीहरू अभिभावकको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएर आफैं स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न थाल्छन् । हामीकहाँ भने स्नातक तहसम्मको विद्यार्थीलाई लुगाफाटादेखि खानपिनसम्म अभिभावकले तयार पारिदिनुपर्ने हुन्छ । घरेलु काममा उनीहरू शून्य अवस्थामा देखिन्छन् । घरव्यवहार, दुःखसुख अनि कर्तव्य र दायित्वका पक्षहरू उनीहरूका लागि नौला लाग्छन् किनकि उनीहरू त केवल किताबी संसारमा व्यस्त रहन्छन् ।
जीवनमा सफल बन्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिले जीवन–जगत्लाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो कर्तव्य र अधिकारका पाटाहरू पहिल्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ऊ जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै परिवार तथा समाजमा भिज्नुपर्छ । आजका हाम्रा बालबालिकाले यस्तो अवसर पाएका छैनन् । पढाइका कारण उनीहरू अत्यन्त बेफुर्सदिला भएका छन् । उनीहरूसँग अभिभावकछेउ बसेर घरव्यवहारका कुरा गर्ने न समय छ न त त्यसबारे चासो नै छ । कतिपयलाई त आफ्ना अभिभावकले के गर्छन्, परिवारको आयस्रोत के हो अनि उनीहरूको भविष्यका लागि अभिभावकले कति दुःख गरिरहेका छन् भन्नेसम्म थाहा हुँदैन । त्यसैले उनीहरू केवल सुखापेक्षी देखिन्छन् । सुखभन्दा दुःखलाई नजिकबाट चिन्न सकेमा मात्र जीवन सफल हुन्छ भन्ने तथ्यबाट हाम्रा बालबालिका अनभिज्ञ छन् ।
एकातिर बढ्दो प्रविधि प्रयोगका कारण बालबालिकामा विदेशी प्रभाव परिरहेको छ भने, अर्कातिर उनीहरू आफ्नो संस्कार–संस्कृति बुझ्ने र त्यसलाई अनुसरण गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका देखिन्छन् । पहिलापहिला दसैं आदि चाडपर्वका बेला विद्यालयमा लामो बिदा हुन्थ्यो । बालबालिका आफ्नापुर्ख्यौली घरमा गएर समय बिताउँथे । यसबाट पारिवारिक सद्भाव र सहकार्यको भावना विकसित हुन्थ्यो । आजभोलि विद्यालयहरूले यस्तो बिदा छोट्याएकाछन् । त्यही छोटो बिदामा पनि गृहकार्यको गह्रौं भारी बोकाइदिनाले उनीहरू चाडपर्वमा पनि रमाउन सक्दैनन् । चाडपर्वको महत्त्व बुझ्नु, परिवार तथा साथीभाइसँग हाँसखेल गर्नु अनि निस्फिक्री मनोरञ्जन गर्न पाउनुपर्ने त्यो समयमा पनि उनीहरू किताब, कापी अनि मोबाइल र ल्यापटपमै घोत्लिइरहेका हुन्छन् । चाडपर्वमा पनि रमाइलो गर्न नपाउँदा उनीहरूमा पढाइप्रति वितृष्णासमेत जाग्ने गर्छ ।
पढाइ स्वैच्छिक र स्वतःस्फूर्त नभई बाध्यकारी एवम् निर्देशित बन्नुमा विद्यालय र शिक्षकहरू मात्र नभई अभिभावक पनि दोषी देखिन्छन् । विद्यालयले धेरै गृहकार्य दिँदा र विद्यार्थी पढाइमा मात्र घोटिँदा उसको पढाइ अब्बल भएको ठान्नु अभिभावकको कमजोरी हो । यद्यपि कतिपय विद्यार्थी गृहकार्यलाई मात्र पढाइ ठानेर त्यसबाहेक आफूखुसी पढ्ने गर्दैनन् । उनीहरूको यस्तो प्रवृत्तिका आधारमा सबैलाई गृहकार्यको अत्यधिक बोझ बोकाउनु उपयुक्त हुँदैन । बालबालिकामा पढाइ आफ्नै लागि हो, त्यसैले आफ्नो रुचि र इच्छाले पढ्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराइनुपर्छ । शिक्षक तथा अभिभावकका लागि पढिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका विद्यार्थी भविष्यमा सफल बन्न सक्दैनन् ।
पाठ सार्ने र घोक्ने गृहकार्यले बालबालिकाको सृजनात्मक क्षमताको विकास गर्न सक्दैन । यस सम्बन्धमा शिक्षकहरू सचेत हुनैपर्छ । त्यसैले गृहकार्य दिँदा जीवनोपयोगी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सकेसम्म उनीहरू आफैंले अनुभव गर्ने, प्रयोग गर्ने र बुझ्ने खालका समस्याहरू दिइनुपर्छ । गृहकार्य गर्दागर्दै आधा रात बित्ने अवस्था नहुने हो भने उनीहरू खेल्न, मनोरञ्जन गर्न तथा परिवारमा घुलमिल भएर व्यावहारिक ज्ञान–सीप हासिल गर्न सक्छन् । यसबाट उनीहरू मानसिक रूपमा चुस्त पनि हुन्छन् । माध्यमिक तहमा पुगेका विद्यार्थीहरूलाई त परिवार एवम् समग्र समाजबारे बुझ्ने र त्यसप्रतिको आफ्नो दायित्व पहिचान गर्ने वातावरण सृजना गरिनुपर्छ । यसका लागि उसलाई पठनपाठनका साथै समाचार सुन्ने, पत्रपत्रिका पढ्ने, परिवार तथा समुदायका गतिविधिमा सहभागी हुने समय हुनुपर्छ ।
शिक्षा भनेको बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभा र क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने माध्यम हो, उनीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञानको भारी बोकाउनु होइन । विडम्बना, हामीकहाँ यस्तो सोच न पाठ्यक्रम र शैक्षिक पद्धति निर्माण गर्नेहरूमा पाइन्छ न त विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरूमै । हाम्रो शैक्षिक गतिविधि केवल परीक्षामुखी छ । परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन सक्ने विद्यार्थी मात्र सर्वोत्कृष्ट ठानिने परिपाटीका कारण बालबालिकाका भिन्न रुचि, क्षमता र सृजनशीलता ओझेलमा परिरहेको छ । यसका साथै उनीहरू पढाइको अत्यधिक बोझका कारण मानसिक रूपमा रुग्णसमेत बन्दै गएका छन् । यसतर्फ विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक सबै संवेदनशील हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०८:०५